यो तिहारमा चलचित्र "फाटेको जुत्ता" टिमले बाड्ने भयो नयाँ जुत्ता, नयाँ जुत्ता पाउन के गर्नुपर्छ ??? – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainmentयो तिहारमा चलचित्र “फाटेको जुत्ता” टिमले बाड्ने भयो नयाँ जुत्ता, नयाँ जुत्ता पाउन के गर्नुपर्छ ???
October 10, 2017 Keshab Khadka Entertainment, Event, Kollywood 0
अर्जुन कुमार फिल्मस प्रोडक्सन्ज द्वारा निर्मित चलचित्र ‘फाटेको जुत्ता’ ले तिहारको अबवसर पारेर तिहारको शुभकामना सहित लक्की ड्र योजना ल्याएको छ । अब नयाँ जुत्ता किन्न भन्दा पनि आफुसँग भएको पुरानो जुत्ता लाई फेसबुकमा अपलोड गर्दा तिहार अझै रमाइलो हुनेभएको छ ।
नयाँ जुत्ता पाउनको लागि आफुसँग भएको फाटेको जुत्ताको फोटो फेसबुकमा अपलोड गरी उक्त पोस्ट फाटेको जुत्ता टिम अथवा फाटेको जुत्ताको पेज लाई ट्याग गर्नुपर्ने हुन्छ । यो योजना मा यस चलचित्र टिमले २५० जना लाई नयाँ जुत्ता प्रधान गर्नेछ । लक्की ड्र मार्फत छानेको २५० जना बिजेतालाई घरैमा जुत्ता पुराउने(नेपाल भरी) टिमले जानकारी दिएको छ ।